Ilaah Wiil, Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Ilaah, Wiilku, waa qofka labaad ee ilaahnimada, oo uu abuuray aabuhu da’ado ka hor. Isagu waa erayga iyo u ekaanta Aabbaha xagga isaga, oo wax walbana isagaa uumay isaga. Waxaa laga soo diray Aabaha sidii Ciise Masiix, Eebbe, oo loogu muujiyey jidhka inuu awood inoo siiyo badbaadada. Waxaa helay Ruuxa Quduuska ah oo ku dhashay Maryantii bikradda ahayd, isagu wuxuu ahaa Ilaah oo dhan iyo nin oo dhan, waxay ku midoobeen laba dabeecadood oo hal qof ah. Isaga, Wiilka Ilaah iyo Eebaha Wax walba, waa mudan yahay maamuus iyo cibaado. Sidii badbaadiyaha badbaadada ee bini-aadamka, wuxuu u dhintay dembiyadeenna aawadood, oo laga soo qaaday jirka oo loo aaday xagga jannada, halkaas oo uu ku sameeyo dhexdhexaadiye u dhexeeya nin iyo Ilaah. Wuxuu ku noqon doonaa ammaanta inuu boqorrada oo dhan dhex xukumo boqortooyada Ilaah isagoo ah boqorrada boqorrada. (Yooxanaa 1,1.10.14; Kolosay 1,15: 16-1,3; Cibraaniyada 3,16; Yooxanaa 2,13; Tiitos 1,20; Matayos 10,36; Falimaha Rasuullada 1; 15,3 Korintos 4-1,8; Cibraaniyadii Cibraaniyada 19,16); Muujintii)
Ciise qudhiisa ayaa xertiisii ​​weyddiiyey su'aasha aqoonsiga ee aan halkaan wax kaga qabanno: "Dadku maxay ku yiraahdaan Wiilka Aadanaha waa?" Anaga ahaan weli way habboon tahay maanta: Waa kuma ninkan? Waa maxay awoodda qareenka ee uu haysto? Maxaynu isaga u aamineynaa? Ciise Masiix waa udub dhexaadka iimaanka masiixiga. Waa inaan fahamnaa nooca qofka uu yahay.
Dhamaan aadanaha - iyo inbadan
Ciise wuxuu ku dhashay si caadi ah, wuxuu ku koray si caadi ah, gaajooday oo harraadsanaa oo daalay, wax cunay oo wax cabbay oo jiifay. Wuxuu u ekaa mid caadi ah, wuxuu ku hadlaa luqadda maalin walba, si caadi ah ayuu u socday. Wuxuu lahaa dareen: naxariis, xanaaq, yaab, murugo, cabsi (Matayos 9,36:7,9; Luukos 11,38: 26,37; Yooxanaa; Matayos). Wuxuu baryay Ilaah sidii dadku ay u yeeleen. Wuxuu isu yeeray inuu yahay qof bini aadam ah, waxaana loola hadlay sidii qof bini aadam ah. Wuxuu ahaa bini aadam.
Laakiin wuxuu ahaa shaqsi aan caadi ahayn oo markaa kor u qaadistiisa ka dib, qaar baa beeniyay inuu bini-aadam yahay (2 Yooxanaa 7). Waxay u maleeyeen inuu Ciise yahay mid muqadas ah oo ay rumaysan kari waayeen inuu ku xidho wax kasta oo ku saabsan hilibka, wasakhda, dhididka, shaqooyinka dheefshiidka, iyo cilado la’aanta hilibka. Laga yaabee inuu mar uun u muuqday qof bini aadam ah, sida malaa'igta mararka qaar u muuqdaan sidii bini-aadam, iyagoo aan runtii noqon bini-aadam.
Taas bedelkeeda, Axdiga Cusubi wuxuu caddeeyay: Ciise inuu bini-aadam yahay dareenka buuxa ee ereyga. Johannes wuxuu xaqiijiyay:
"Ereyguna wuxuu noqday jidh ..." (Yooxanaa 1,14). Wuxuu "u muuqday" maaha oo keliya sidii hilibka mana "u labisan" hilib oo keliya. Wuxuu noqday hilib. Ciise Masiix "jidhka ayuu u yimid" (1 Yooxanaa 4,2). Waan ognahay, ayuu yidhi Johannes, sababta oo ah waan aragnay isaga iyo sababta oo ah waannu taabannay (1 Yooxanaa 1,1: 2).
Sida laga soo xigtay Paul, Ciise wuxuu noqday "sida dadka" (Filiboy 2,7), "oo sharciga ku hoos jira" (Galatiya 4,4), "qaab jidhka dembiga leh" (Rooma 8,3). Qoraa warqad u ah Cibraaniyada ayaa ku doodaya in kii u yimid inuu madax furto ninku waa inuu ahaadaa nin aasaas ahaan: «Sababtoo ah carruurtu haatan waa hilib iyo dhiig, wuuna u aqbalay si isku mid ah ... Sidaa darteed, waa inuu isku mid noqdo wax kasta oo uu ku sameeyay walaalihiis. » (Cibraaniyada 2,14: 17).
Badbaadadeenu waxay kuxirantahay inuu Ciise runtiisu ahaa - oo uu yahay aadanaha. Doorkiisa qareenkayaga, wadaadkayadeena sare, waxay kuxirantahay inuu runtii soo maray wax bini aadam ah (Cibraaniyada 4,15). Xitaa ka dib sarakiciddiisa, Ciise wuxuu lahaa hilib iyo lafo (Yooxanaa 20,27:24,39; Luukos). Xitaa ammaanta jannada, wuxuu ahaa aadanaha (1 Timoteyos 2,5).
U dhaqan sida Ilaahay
Waa kuma? ”Farrisiintu waydiiyeen markii ay arkeen Ciise oo cafiya dembiyada. Ayaa dembiyo cafiyi kara Ilaah keliya? (Luukos 5,21.) Dembigu waa gaf ka dhan ah Ilaah; nin sidee buu Ilaah ugula hadli karaa oo oran karaa dembiyadaada waa la tirtiraa, oo la baabi'iyey? Waa cay, ayay yidhaahdeen. Ciise wuu ogaa waxa ay ka fekerayaan welibana dambiyada wuu cafiyey. Xitaa wuxuu ka dhawaajiyay inuu isagu naftiisu dambi lahayn (Yooxanaa 8,46). Wuxuu sameeyay sheegashooyin yaab leh:
Ciise wuxuu yidhi inuu fadhiisan doono midigta Ilaah ee jannada ku jirta - sheegasho kale oo ay wadaaddada Yuhuudda dareemayaan inay tahay cay (Matayos 26,63: 65).
Wuxuu sheegtay inuu yahay Wiilka Ilaah - tani sidoo kale waxay ahayd cay, maxaa yeelay dhaqankaas waxaa caado u ahayd inuu Ilaah ahaado (Yooxanaa 5,18: 19,7).
Ciise wuxuu sheegtey inuu si buuxda ula heshiiyay Ilaah sidaa darteed wuxuu sameeyey waxa Ilaah doonayo (Yooxanaa 5,19).
Wuxuu sheegtey inuu mid la yahay aabaha (Yooxanaa 10,30), oo wadaaddada Yuhuuddu sidoo kale u tixgeliyeen cay (Yooxanaa 10,33).
Wuxuu sheegtey inuu yahay ilaah u eg in qof kasta oo isaga arkay uu aabihii arkay (Yooxanaa 14,9: 1,18).
Wuxuu sheegay inuu awood u leeyahay inuu diro Ruuxa Ilaah (Yooxanaa 16,7).
Wuxuu sheegtay inuu awood u leeyahay inuu soo diro malaa'igo (Matayos 13,41).
Wuxuu ogaa in Ilaah yahay xaakinka adduunka isla mar ahaantaana sheeganaayo in Ilaah xukumay isaga
übergeben (Yooxanaa 5,22).
Wuxuu sheegtey inuu awood u leeyahay inuu soo sara kiciyo kuwii dhintay, oo uu ku jiro naftiisa (Yooxanaa 5,21; 6,40; 10,18).
Wuxuu sheegay in nolosha weligeed ah ee qof walba ay ku tiirsan tahay xiriirkooda ay la leeyihiin Ciise (Matayos 7,22: 23).
Wuxuu yidhi erayada Muuse kuma filna (Matayos 5,21: 48).
Wuxuu isku sharaxay inuu yahay Sayidka sabtida - oo ah sharci uu Ilaah siiyay! (Matayos 12,8.)
Haddii isagu aadamiga uun ahaan lahaa, waxay noqon lahayd mid faanid ah, iyo waxbarid dembi leh. Laakiin Ciise wuxuu ku taageeray ereyadiisa shaqooyin yaab leh. «I rumaysta inaan ku jiro aabaha, aabuhuna uu igu jiro; haddii kalese i rumayso shuqullada aawadood) (Yooxanaa 14,11). Mucjisooyinku cidna kuma rumeyn karaan, laakiin waxay noqon karaan "caddayn" xoog leh.
Si loo muujiyo inuu awood u leeyahay inuu cafiyo dembiyada, Ciise wuxuu bogsiiyey nin curyaan ah (Luukos 5, 17-26). Mucjisooyinkiisa ayaa cadeynaya in waxa isaga naftiisa ka sheegay ay run yihiin. Wuxuu leeyahay awood kabadan oo bini aadamka sababta oo ah wuu ka badan yahay aadanaha. Sheegashooyinka naftooda - cayda kasta - waxay ku salaysnayd runta Ciise. Wuxuu hadli karaa sidii Ilaah oo wuxuu u dhaqmi jiray sidii Ilaah oo kale maxaa yeelay isagu wuxuu ahaa Ilaah xagga jidhka.
Ciise si cad ayuu u gartay aqoonsigiisa. Laba iyo toban jir wuxuu xidhiidh gaar ah la lahaa Aabaha jannada ku jira (Luukos 2,49). Markii la baabtiisay, wuxuu maqlay cod samada ka leh, Adigu waxaad tahay wiilkayga aan jeclahay (Luukos 3,22). Wuxuu ogaa inuu haysto howsha uu qabanayo (Luukos 4,43; 9,22; 13,33; 22,37).
Ereyga Butros "Adigu waxaad tahay Masiixa, oo ah Ilaaha nool ee Wiilka!" Ciise wuxuu ugu jawaabay, Waad barakaysan tahay Simoon ina Yoonisow; maxaa yeelay, jidhka iyo dhiiggu kuma aydaan kuu muujin, laakiin Aabbahayga jannada ku jira ayaa kuu muujiyey (Matayos 16, 16-17). Ciise wuxuu ahaa wiilkii Ilaah. Isagu wuxuu ahaa Masiixa, Masiixa - oo uu subkay Ilaah subkuu u diray hawl aad u muhiim ah.
Goortuu u yeedhay laba-iyo-toban xertii, midba qolo reer binu Israa'iil ah, iskumana xisaabin laba iyo tobankii. Wuu ka sare maray iyaga, maxaa yeelay isagu wuu ka wada sarreeyey reer binu Israa'iil oo dhan. Isagu waa abuuraha iyo dhisaha Israa'il cusub. Karaamada, wuxuu naftiisa u muujiyey aasaaska axdiga cusub, cilaaqaad cusub oo lala yeesho Ilaah. Wuxuu isu arkay naftiisu inay tahay waxa diirada u saaran waxa Eebbe ka qabanayo adduunka.
Ciise si geesinimo leh ayuu uga hor yimid caadooyinka, sharciga ka hor imanaya, macbudka, iyo masuuliyiinta diinta. Wuxuu xertiisii ​​ka dalbaday inay wax walba ka baxaan oo ay raacaan, si ay isaga ugu horreeyaan noloshooda, si ay isaga daacadnimo buuxda ugu sii yeeshaan. Wuxuu la hadlay awoodda Ilaah - isla mar ahaantaana uu la hadlay awooddiisa.
Ciise wuxuu rumeysan yahay in waxsii Axdiga Hore la rumoobay isaga. Wuxuu ahaa addoonka silica ee u dhiman doona inuu dadka ka furto dembiyadooda (Ishacyaah 53,4: 5-12 iyo 26,24; Matayos 9,12:22,37; Markos 24:46; Luukos;,). Wuxuu ahaa amiir nabadeed oo loo haystay inuu dameer ku soo dego Yeruusaalem (Sekariah 9,9-10; Matayos 21,1-9). Wuxuu ahaa Wiilka Aadanaha oo loo baahan yahay in xoog iyo qalalaase oo dhan la siiyo (Daanyeel 7,13: 14-26,64; Matayos).
Ciise wuxuu sheegtey inuu noolaa ka hor Ibraahim oo wuxuu ku muujiyay "waqti la'aan" qaab caadi ah: "Runtii, runtii, waxaan idinku leeyahay: inta uusan Ibraahim noqon, waxaan ahay" (Yooxanaa 8,58). Mar kale wadaaddada Yuhuuddu waxay rumaysteen inuu Ciise qaadanayo waxyaabaha rabbaaniga ah oo uu doonayay inuu dhagxiyo (V. 59). Odhaahda "Waxaan ahay" waxay u egtahay Baxniintii 2:3,14, halkaasoo Ilaah magiciisa ugu muujiyey Muusena. (Tarjumaadda Elberfeld). Ciise magacan ayuu halkan ku qaataa.
Ciise wuxuu xaqiijinayaa in "dunidu intuusan jirin" uu isagu durba la wadaago ammaanta Aabaha (Yooxanaa 17,5). Johannes wuxuu inoo sheegayaa inuu jiray bilowgii waqtiga: sida eraygu yahay (Yooxanaa 1,1). Iyo sidoo kale Johannes-ka waxaad ka akhrisan kartaa in "wax walba" lagu sameeyay erayga (Yooxanaa 1,3). Aabuhu wuxuu ahaa qorsheeye, ereyga abuuraha, kaas oo fuliyay qorshihii. Wax walba waxaa sameeya isaga iyo isaga (Kolosay 1,16:1; 8,6 Korintos). Cibraaniyada 1,2 ayaa sheegaya in Ilaah "dunida abuuray" xagga Wiilka.
Cibraaniyada, sida Kolostolos, waxay ku leedahay wiilku "xambaarsan" adduunka, in ay ku jirto "isaga (Cibraaniyada 1,3; Kolosay 1,17). Labaduba waxay noo sheegaan inuu yahay “suuradda Ilaaha aan la arki karin” (Kolosay 1,15), «aragtida uu isagu» (Cibraaniyada 1,3).
Yuu yahay Ciise Isagu waa ilaah hilib noqday. Isagu waa abuuraha wax kasta, waana amiirka nolosha (Falimaha Rasuullada 3,15). Wuxuu u eg yahay sidii Ilaah oo kale, oo wuxuu leeyahay sharaf xagga Ilaah la mid ah, wuxuu leeyahay xoog la mid ah kan Ilaah leeyahay. La yaab ma laha xertii inay garteen inuu isagu yahay Rabbaani, Eebbe kuna jiray jidhka.
Ku istaahila cibaadada
Fikirka Ciise ayaa u dhacay si ka sarraysa heer ka sarraysa (Matayos 1,20; Luukos 1,35). Wuxuu ku noolaa weligiis dembi (Cibraaniyada 4,15). Wuxuu ahaa nin aan cillad lahayn, oo aan lahayn cilado (Cibraaniyada 7,26; 9,14). Isagu ma uu dembaabin (1 Pt 2,22); oo isaguna dembi kuma uu jirin (1 Yooxanaa 3,5); Wuxuu ogaa inaanu dembaabin (2 Korintos 5,21). Si kasta oo uu jirku u xoog badanaa, Ciise had iyo goor wuxuu lahaan rabitaan xoog leh addeeca Ilaah. Ujeeddadiisu waxay ahayd inuu sameeyo doonista Ilaah (Cibraaniyada 10,7).
Dadku waxay caabudi jireen Ciise dhowr jeer (Matayos 14,33; 28,9 iyo 17; Yooxanaa 9,38). Malaa'igta lama caabudi karo (Muujintii 19,10), laakiin Ciise wuu u oggolaaday. Haa, malaa'igahu sidoo kale waxay caabudaan Wiilka Ilaah (Cibraaniyada 1,6). Salaadaha qaarkood si toos ah ayaa looga hadlay Ciise (Falimaha Rasuullada 7,59-60; 2 Korintos 12,8; Muujintii 22,20).
Axdiga Cusubi wuxuu ka hadlayaa amaanado aad u sarreeya oo la xiriira ciise masiix, oo leh qaacidooyin sida caadiga ah loogu qoondeeyey Ilaah: «Ammaanta isagaa leh weligiis iyo weligiis! Aamiin » (2 Timoteyos 4,18;
2. Butros 3,18:1,6; Muujintii). Wuxuu leeyahay cinwaanka hogaamiyaha ugu sareeya ee la bixin karo (Efesos 1,20: 21). Haddii aan ugu yeerno Ilaah inuu yahay, intaas aad uma badna.
Muujintii Ilaah iyo Wanka waxaa la siiyay ammaan isku mid ah, oo tilmaamaysa sinnaanta: "Kan carshiga ku fadhiya carshiga iyo Wanka ammaan iyo ammaanta iyo ammaanta iyo rabshadda weligiis iyo weligiis!" (Muujintii 5,13). Wiilku waa in la sharfaa sidoo kale aabihiis (Yooxanaa 5,23). Ilaah iyo Ciise waxaa loo wada yaqaan Alfa iyo Omega, bilowga iyo dhammaadka wax walba (Muujintii 1,8 & 17; 21,6; 22,13).
Qoraallada Axdiga Hore ee ku saabsan Ilaah waxaa badanaa lagu qaadanayaa Axdiga Cusub waxaana lagu dabaqayaa Ciise Masiix. Mid ka mid ah kuwa ugu yaabka badan ayaa ah tuducdan ku saabsan cibaadada: «Sababtaas awgeed ayaa Ilaah isaga u sarraysiiyey oo wuxuu isaga siiyey magaca ka sarreeya dhammaan magacyada ku jira magaca Ciise
dhammaan jilibyada ku jira jannada iyo dhulka iyo waxyaalaha dhulka hoostiisa ku jira, oo afaf oo dhammuna waa inay qirtaan in Ciise Masiix yahay Rabbiga ammaanta Ilaaha Aabbaha ah (Filiboy 2,9-11, oraah ka timid Ishacyaah 45,23). Ciise waxaa la siiyay maamuus iyo qadarin taas oo ah sida uu Ishacyaah u sheegayo waa in la siiyo Ilaah.
Ishacyaah wuxuu leeyahay hal Badbaadiye oo keliya ayaa ah - Ilaah (Ishacyaah 43:11; 45,21). Bawlos wuxuu si cad u sheegayaa in Ilaah yahay Badbaadiye, laakiin sidoo kale in Ciise yahay Badbaadiye (Tit1,3; 2,10 iyo 13). Hadda ma jiraa Badbaadiyaha ama laba? Masiixiyiintii hore waxay soo gabagabeeyeen in Aabuhu Ilaah yahay iyo ciise waa Ilaah, laakiin waxaa jira hal Ilaah oo kaliya sidaa darteedna hal Badbaadiye oo keliya. Aabaha iyo wiilku aasaas ahaan waa isku mid (Eebbe), laakiin waa dad kala duwan.
Dhawr aayado kale oo Axdiga Cusub ah ayaa iyaguna loogu yeerayaa Ciise Ilaah. Yooxanaa 1,1: "Ilaah wuxuu ahaa Ereyga". Aayadda 18: «Qofna weligiis ma arkin Ilaah; Kii waddaniga ahu, kan Ilaah yahay oo ku jira gacanta aabbaha, ayaa na noo sheegay. Ciise waa ilaah ina ogeysiiyo aabaha. Sarakicidda kuwii dhintay ka dib, Toomas wuxuu Ciise u aqoonsaday inuu yahay Ilaah: “Toomas ayaa u jawaabay oo ku yidhi, Rabbigay iyo Ilaahayow! (Yooxanaa 20,28).
Bawlos wuxuu leeyahay awoowayaashu waa ku weyn yihiin iyaga sababta oo ah, Masiixu wuxuu u yimaadaa xagga jidhka xagga ilaahay oo wax walba ka sarreeya, oo weligiis lagu ammaano. Aamiin » (Rooma 9,5). Waraaqda ay u qortay Cibraaniyada, Eebbe laftiisu wuxuu ugu yeedhay wiilka "Ilaah": "Ilaahow, carshigaagu weligiis buu sii jirayaa ..." (Cibraaniyada 1,8).
Bawlos wuxuu yidhi, Maxaa yeelay, isaga oo ah Masiixa, oo buuxnaanta Ilaahnimada oo dhan ayaa ku jirta shaqsi ahaaneed (Kolosay 2,9). Ciise Masiix waa Ilaah dhammaan oo wali wuxuu leeyahay "jir" maanta. Isagu waa suuradda Ilaah ee saxda ah - Eebbe jidh ahaan. Haddii Ciise kaliya uu ahaa aadanaha, waxaa khalddanaa in aan aaminno isaga. Laakiin maadaama uu ilaah yahay, waa inaan aaminnaa. Isaga oo shuruud la'aan lagu aamini karin maxaa yeelay isagu waa Ilaah.
Anaga ahaan, ilaahnimadiisa ciise waa muhiimad aad u muhiim ah, maxaa yeelay hadii uu ilaah yahay kaliya ayuu si sax ah noogu sheegi karaa Ilaah (Yooxanaa 1,18: 14,9). Keligii qof keli ah ayaa Ilaah noo cafin kara dembiyadeenna, na soo furan kara, naftayada Ilaah la heshiin. Keligii qof keli ah ayaa noqon kara shayga iimaankeenna, Rabiga, oo aan u leennahay aaminnimo aan xad lahayn, Badbaadiye, oo aan ku caabudno gabay iyo duco.
Runtii bini aadam, runtii Ilaahow
Sida laga arki karo tixraacyada la soo xigtay, "Sawirka" Ciise "ee Kitaabka Quduuska ah wuxuu ku faafay dhammaan Axdiga Cusub dhagxaanta mosaiciga ah. Sawirku waa isku mid, laakiin meel keliya lagama helin. Kaniisadda asalka ahayd waa inay ka koobnaataa dhismeyaasha hadda jira. Waxay ka soo baxday gunaanadkii soo socda ka soo dajinta Kitaabka Qudduuska ah:
Ciise, oo ah wiilka Ilaah, waa ilaah.
Wiilka Ilaah runti wuxuu noqday bini aadam, laakiin Aabbuhu ma uusan yeelin.
Wiilka Ilaah iyo Aabuhu way kala duwan yihiin, isku mid ma ahan
Waxaa jira ilaah kaliya.
Wiil iyo aabuhu waa laba qof oo hal ilaah ah.
Golaha Nicaea (AD 325) wuxuu aasaasay ilaahnimadiisa Ciise, Wiilka Ilaah, iyo aqoonsigiisa aabaha (Caqiidada Nicene). Golaha Chalcedon (451 AD) wuxuu ku daray inuu sidoo kale bini aadam ahaa:
«[Markaan raacno aabayaasha quduuska ah, dhammaanteen waan isla wada barinnaa in Sayidkeenna Ciise Masiix uu yahay wiil isku mid ah oo qirta. waa isku qumman yahay ilaahnimada iyo isku bani aadamka, waa isku ilaahay runtii iyo runtii aadam ... Kahor waqtiyada dhalashada Aabbaha sida ay tahay ilaahnimadu ... Maryan, bikradda iyo Hooyada Ilaah (theotokos) [wuxuu dhashay], isagu waa isku mid, Masiix, Wiil, Dhalad ah, oo aan lahayn laba dabeecadood ... Kala duwanaanshaha dabeecadaha sinaba looma burin karo danaynta midnimada; taa badalkeed, sida ay u kala duwan yihiin labada dabeecadoodba waa la ilaaliyay oo waxay ku xidhan yihiin hal qof ... »
Qaybta ugu dambeysa ayaa lagu daray maxaa yeelay dadka qaar waxay sheegteen in dabeecadda Eebbe dabeecadda aadanaha ee Ciise ay gadaal ka riixday asal ahaan ilaa Ciise runtii bini-aadam ahaan ma ahan. Qaar kale waxay ku andacoodeen in labada dabeecadood isku daraan si ay u yeeshaan dabeecad saddexaad, sidaa daraadeed in Ciise uusan ahayn ilaahnimo ama aadane. Maya, caddaynta Baybalka ayaa muujineysa inuu Ciise dhammaan ahaa aadanaha iyo dhammaan Ilaahay. Kaniisaduna sidoo kale waa inay sidoo kale bartaa.
Sidee kani kani noqon karaa?
Badbaadadeenu waxay kuxirantahay xaqiiqada inuu Ciise ahaa nin ahaana Ilaah. Laakiin sidee buu wiilka Quduuska ah ee Eebbe u noqon karaa nin qaatay qaabka jidhka dembiga?
Su’aasha ayaa inta badan soo baxda sababta oo ah bini’aadamka sida aan hadda u aragno waa mid aan rajo lahayn. Sidan maahan in Eebbe abuuray. Ciise wuxuu ina tusayaa sida bini aadamku u awoodo oo ay u ahaato run. Ugu horreyntii, wuxuu na tusayaa qof gebi ahaanba ku tiirsan aabaha. Taasi waa sida ay ku habboon tahay insaanka.
Wuxuu sidoo kale na tusay waxa Eebbe awood u leeyahay. Wuxuu awoodaa inuu qayb ka noqdo abuurkiisa. Wuxuu xiri karaa farqiga u dhexeeya waxa aan la abuurin iyo waxa la abuuray, inta u dhaxaysa xurmada iyo dambiilaha. Waxaan u maleyn karnaa inaysan macquul aheyn; waa u suurtoobaan Eebbe. Ciise sidoo kale wuxuu ina tusayaa waxa bini aadamku ku dhex abuuri doono abuurka cusub. Haduu soo noqdo oo nala sara kiciyo, waxaan isaga u ekaan doonnaa isaga (1 Yooxanaa 3,2). Waxaan lahaan doonnaa jidh qudha, sida jidhkiisii ​​wareejiyay (1 Korintos 15,42: 49).
Ciise waa raad-raacdeena, wuxuu na tusay in jidka loo maro xagga Ilaah inuu yahay Ciise. Maxaa yeelay isagu waa bini aadam, wuxuu dareemayaa daciifnimadeena; maxaa yeelay isagu waa Ilaah, wuxuu si wax ku oolla ugu istaagi karaa midigta Ilaah. Ciise oo ah Badbaadiyeheenna, waxaynu ku kalsoonaan karnaa inay badbaadadeennu nabad tahay.